सुनमा भन्सार बढेसँगै मूल्यमा प्रतितोला २३ सयले बृद्वि | Kendrabindu Nepal Online News
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १९:१४
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सुनचाँदी आयातमा भन्सार बृद्वि गरेको छ । विहीबार घोषणा गरेको बजेटमा सुन प्रति १० ग्राममा २ हजार रुपैयाँले बृद्वि गरेको छ।
यसरी सरकारले बृद्वि गरेको भन्सार महसुलपछि सुन प्रतितोला मूल्यमा २३ सय ३२ रुपैयाँले बढेको छ। कोरोना भाइरसले शिथिल बनेको सुनचाँदी व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय सुनको मूल्यले ठूलो प्रभाव पारेको बेला अझ सरकारले पनि भन्सार महसुल बृद्वि गरेर थप भार थपिएको छ।
सरकारले सुन आयात गर्दा लाग्ने कर वृद्धिपछि यसअघि निर्धारण हुँदै आएको मूल्यमा अब साढे २३ सय रुपैयाँ थपेर मात्रै नयाँ मूल्य तोक्नु पर्ने भएको छ । सरकारले सुन आयात भन्सार महसुल बृद्वि गरेसँगै यसअघि प्रति १० ग्राम सुनमा ६ हजार पाँच सय रुपैयाँले लाग्दै आएको भन्सार महशुल बजेटपछि दुई हजार रुपैयाँले बढाएर ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। एक तोला सुनमा ११.६६४ ग्राम सुन हुन्छ ।
यस्तै चाँदीमा प्रतिकिलो ७५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्सार महशुल १० हजारले बढाएर ८५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । साबिकको भन्सार महशुलमा सुनको प्रतितोला भन्सार महशुल ३१ प्रतिशतले र चाँदी १३ प्रतिशतले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । कोरोना पछिको लकडाउनले सुनचाँदी व्यवसायनै शिथिल बनेको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। यसमा पनि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको सुनको मूल्यले पनि नेपालको सुनचाँदी क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। बारम्बार मूल्यबृद्वि भएकाले सुनचाँदीमा उपभोक्ता कमि भएको छ। अब त्यसमाथि पनि सरकारले भन्सार महसुल बढाएर अझ मारमा पारेको शाक्यको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अब सरकारले बजेट मार्फत बृद्धि गरेको भन्सार महसुलले व्यवसायीलाई नै धरापमा पारेको छ। उनले भने, सरकारले धेरै राजस्व उठाउनको लागि भन्सार महसुलमा बृद्वि गरेको होला तर विगत ४ महिना देखि आयात नै ठप्प छ भने अब सरकारले यो क्षेत्रबाट के अपेक्षा गरेको छ ?
यति सानो बजारमा एक तोला सुनमा १० हजार रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्ने भएको छ। यसमा सरकारको कदम गलत भएको छ ।यसमा व्यवसायीहरुको आपत्ती रहेको उनको भनाइ छ।
दुई महिनादेखि बन्द रहेको सुनचाँदी व्यवसायमा सरकारको कदमले थप धरासायी हुन सक्ने महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले यसरी व्यवसायलाई नै सङकट पर्ने गरि भन्सार बढाउँदा व्यवसायीभन्दा उपभोक्ताका बढी मार पर्ने गर्छ । उनले भने, सरकारको यो कदम आपतिजनक छ। अब नेपालमा सुनको मूल्य करिब १ लाखको हाराहारीमा पुग्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
budget-2077, सुनमा भन्सार
Prevकति छ खेलकुद क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट ?
प्रदेश नं २ मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४९६Next